Kaban - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan kabanka. Sidoo kale fiiri Gitaar.
Kaban, Cuud (; ) waa qalab ka samaysay alwaax iyo xodhko kaasi oo sameeya shanqad muusig ah. Kabanka Waxaa loo isticmaala in lagu qurxiyo heesaha.
Qalab xadhko leh
Maanta laga isticmaalo
Meelo kale Aasiya
Kabanka laga isticmaalo dhulka Soomaalida waa mid u sameeysan qaabka ubada (leh madax wareegsan iyo dabo dhuuban), wuxuuna inta u badan leeyahay 10 xadhig midaasi oo ka duwan gitaarka. Sidoo kale wuxuu leeyahay ugu yaraan labo dalool (qaarkood ilaa afar dalool) kuwaasi oo codka iyo shanqadhu ka soo baxdo.
Kabanka wuxuu caan ka yahay Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika, inkasto laga isticmaalo dhamaan caalamka. Intaas Waxaa dheer, heesaha kabanka kali ah lagu qaado Waxaa loo yaqaanaa qaaci waana heeso degan oo naftu ku raaxaysato.
Muuqaalka qoraal ka hadhay qarnigii 9aad kaasi oo muujinaya qalab u eeg kabanka
Cilmibaadhis qoto dheer oo la sameeyay waxaa lagu ogaaday in gitaarka lagu isticmaali jirey deegaano ka mid ah Bariga Dhexe tan iyo wakhtiyo aad u horeeyay. Warbixintu waxay sheegtay in Mesobotaamiya lagu garaaci jiray wax u eeg kabanka wakhti imika laga joogo 3,500 sano. Sidoo kale waxaa la helay dhagax-gacanku samaysan ah oo jira 3,300 sano kaasi oo uu ku xardhan yahay qof garaacaya (ku ciyaarayna) kaban. Dhagaxaas Waxaa la aaminsan yahay in la sameeyay wakhtigii boqortooyadi kowaad Baabiyloon.
Kaban uu garaacayo Nuradiin Cali Amaan, nooca qaaciga.
waxyar ka maqal shanqadha kabanka
Noocyada kabanka ee maanta la isticmaalo Waxaa loo kala saaraa labo nooc: Carabi iyo Turkish. Inkasto guud ahaan kabanku leeyahay qaabab iyo midab badan Waxaa dhamaantiis asal ahaan uu ka soo jeedaa deegaanada Bariga Dhexe halkaasi oo ilaa maanta uu caan ka yahay. Dadkii ugu horeeyay ee kaban garaacda waxay ahaayeen Ciraaqiyiinta, iyo Suuriyaanka wakhti imika laga joogo dhowr kun sano.
Sidoo kale Waxaa aad uu isticmaali jiray kabanka tan iyo wakhtiyo hore shacabka Turkiga kuwaasi oo qarnigii 18aad keenay magaalada Saylac ee gobolka Awdal, halkaasi oo la aaminsan yahay inay meeshii ugu horeeysay ee kabanka Soomaalida lagu garaaco.
Ilaa hada lama hayo taariikh sugan goortii iyo meesha uu ka soo galay kabanku cariga Soomaalida. Laakiin markii ugu horeeysay Waxaa la aaminsan yahay in dowladii Cusmaaniyiinya ee wadanka Turkiga keentay qarnigii 18aad magaalada Saylac ee gobolka Awdal. Qodobkaasi Waxaa taageeraya in fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed dararay ama balaadhatay wixii ka dambeyay 1930kii, oo wixii intaas ka horeeyay lama aqoon kaban.
So kastaba ha ahaatee, muusiga iyo fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed Waxaa maanta caan ka ah isticmaalka kabanka. Heesaha sida khaaska ah loogu garaaco kabanka Waxaa loo yaqaanaa Qaaci.
Marka dusha laga arkayo Waxaa la moodaa wax fudud oo qof walba garaaci karo, laakiin sida runta ah kabanku wuxuu u baahan yahay xirfad, aqoon iyo gacan furnaan badan. Qofka kabanka sida fiican u garaaca waxay ku qaadataa dhowr sano inuu si fiican ula qabsado, sababtoo ah marka ugu horeeysay wuxuu bahalku dhaawaca faraha.
Si ka duwan gitaarka, kabanku wuxuu leeyahay 10 xadhig kuwaasi iskula socdo si mataano ah (shan kooxood oo min labo xadhig ag), kuwaasi oo dhawaqa ay sameeyaan kala duwan yahay. Xadhkaha sare ayaa ugu dhawaq weyn halka kuwa hoose ugu dhawaqa khafiifsan yihiin. Hadaba marka kabanka la garaacayo Waxaa la isticmaala labada gacmood, mid waxaa lagu garaacaa xadhkaha halka gacanta kale oo lagu qabto qoorta kabanka lagu adkeeyo ama xoojiyo shanqadha ay faraha hore sameeynayaan.
↑ Dr. Michael Kasha, "A New Look at The History of the Classic Guitar", Guitar Review 30, August 1968, pp.3-12.
↑ Findlay, Sharon. Faze (magazine http://faze.ca/issue04/evolution_of_the_guitar.html. Soo qaatay February 23, 2015. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaban&oldid=203481"
Last edited on 13 Luuliyo 2020, at 21:14
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Luuliyo 2020, marka ee eheed 21:14.